Taliye Odawaa oo Saraakiil Mareykan ah kala shirey dagaalka Al-Shabaab - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Taliye Odawaa oo Saraakiil Mareykan ah kala shirey dagaalka Al-Shabaab
Taliyaha Ciidamada Xoogga Dalka, Jeneraall Odowaa Yuusuf Raage oo booqasho ku tegay Saldhigga Balidoogle ee guutada 16aad Ciidamada Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa kulan xasaasi ah la qaatey Saraakiisha iyo Ciidamada.
Taliyaha ayaa ku boggaadiyey guul oo uu sheegay in ciidamada kasoo hooyeen howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka fuliyeen Gobolka Shabeellaha Hoose.
S/guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa wuxuu bogaadiyay askarta iyo Saraakiisha Kumaandooska Xoogga Dalka Hawlgalada ay ka dhanka ah Al-Shabaab ka wada gobolada dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Taliyaha ayaa halkaas kulamo kula qaatay Saraakiisha Mareeykanka iyo Amisom kuwaasi oo looga hadlay sidii loo dardargalinlahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ugu dambeyn Jeneraal Odawaa ayaa wuxuu kormeer kusameeyay dhamaan qeeybaha ay ka koobantahay xerada Balidoogle oo ah taliska guutada 16aad kumaandooska Xoogga Dalka oo inta badan sameeyo howlgalo kala duwan.
Previous articleGuddiga doorashooyinka Qaranka & QM oo ka wada hadley doorashada soo socota
Next articleXildhibaannada Galmudug oo kulan deg deg ah la isugu yeeray